काठमाडौँ । काग तिहारको अवसर पारेर काग सम्मेलन भएको छ । कलाकार रमेश दुलालले काग तिहारको अवसर पारेर १८ वर्षदेखि काग सम्मेलन गर्दै आएका छन्। काठमाडौंको शान्तिबाटिका गेट रत्नपार्कमा बिहान ६ बजे काग सम्मेलन गरिएको हो । रमेशले कागको आवाज निकालेर काग जम्मा गर्ने गरेका छन् । एक सय ७३ जीव जनावर तथा चराचुरुंगीसँगै बाजाको […]
९ कार्तिक २०७८, मंगलवार ०८:३६ October 27, 2021 Nonstop Khabar
एजेन्सी । टर्कीका फोटोग्राफर मेहमत असलनले एउटा यस्तो तस्बिर खिचेका छन् जसले धेरैलाई भावुक बनाउन सक्छ । यो तस्विरले भावुक मात्रै बनाउँदैन यसले जीवनमा हारिसकेका मानिसहरुको हौसला बढाउने कामसमेत गर्छ । यो तस्बिर मार्फत् एक बाबु–छोराको प्रेम देखाइएको छ जो असंख्य समस्या र पीडाबीच पनि हाँसिरहेका छन् । यो तस्विरलाई वर्षको सर्वश्रेष्ठ फोटोको रुपमा चुनिएको […]
३ आश्विन २०७८, आईतवार २३:३८ September 19, 2021 Nonstop Khabar
एजेन्सी । भारतमा १२औं शताब्दीमा बनेको गणेशको मूर्ति फेला परेको छ । दक्षिणपूर्वी भारतका एक किसानले बारीमा उक्त मूर्ति फेला पारेका हुन् । प्रकाशम जिल्लाको मोटुपाली गाउँका किसानले खेत जोत्ने क्रममा उक्त मूर्ति फेला पारेका हुन् । हिन्दू धर्ममा गणेशलाई बुद्धि र विवेकका देवता मानिन्छ । ढुंगाको १८ इन्च अग्लो सो मूर्ति पद्मासन अवस्थाको छ […]
२४ भाद्र २०७८, बिहीबार १८:४८ September 10, 2021 Nonstop Khabar
काठमाडौँ । योगेश भट्टराई र रामकुमारी झाँक्री जिस्किएको भिडियो भाइरल बनेको छ । बुधबारको संसद बैठकपछि संसद भवनमा उनीहरु जिस्किएको भिडियो भाइरल भएको हो । काननी रुपमा योगेश भट्टराई र रामकुमारी झाँक्री अलग दलका सांसद हुन् । संसदमा भेट हुँदा उनीहरु जिस्किएका हुन् । उनीहरु दुई जनासँग अर्का सांसद गणेशकुमार पहाडी पनि थिए ।एमाले विभाजनपूर्व […]
५ असार २०७८, शनिबार १७:४५ June 21, 2021 Buddha Sharan
प्रस्तोता : बुद्ध शरण शाही गोपालकालिन सापू(गाइ पाल्ने, ग्वाला ) ,मेपू ( भैसी पाल्ने ,महिषपाल ) र ज्यापू ( कृषि कर्म गर्ने ) सस्कृतिले सम्पन्न बस्ती कीर्तिपुरमा राजा शिवदेव त्रितियको पालादेखि नया संरचना बनाउन थालियेको हो। ने .स. २१९-२४३ ताका राजा शिवदेव त्रितियले ब्यबस्थित गराएको शिवरत दरवार क्षेत्र (लाय्कु) , बागभैरव र्देवरक्षेत्र मध्ये भगवान […]
महान लेखक टाल्स्टायसँगको एक रोचक प्रसंग
२२ बैशाख २०७८, बुधबार २०:०७ May 5, 2021 Nonstop Khabar
वृद्ध लेखक टाल्सटायलाई एक युवक भेट्न आयो । ऊ एकदमै चिन्तित थियो । टाल्स्टायले सोधे— किन चिन्तित छौ ? मलाई केही पैसा आवश्यक छ । कृपया तपाईंले मेरो मद्दत गरिदिनुस् । टाल्स्टायले भने— मेरो एकजना साथीले मान्छेको आँखा किन्छ । यदि तिमीले तिम्रो आँखा बेच्यौ भने २० हजार त पाइहाल्छौ । युवकले डराएर भन्यो— म […]
जब २३१ यात्री लिएर उड्दै गरेको जहाजमा ह्वारह्वार्ती आगो लाग्यो
९ फाल्गुन २०७७, आईतवार १८:०४ February 21, 2021 Nonstop Khabar
एजेन्सी । अमेरिकामा उड्दै गरेको एक विमानमा आगो लागेको छ । आगो लागेपछि विमानका केही भाग झरेका थिए । डेनवरबाट होनोलुलुका लागि उडान भरेको विमानमा आगो लागेको हो । अमेरिकाको डेनवरनजिक यो घटना भएको हो । उडान भरेपछि आगो लागेको बोइङ ७७७ विमानमा २३१ यात्री र चालक दलका १० जना सदस्य सवार थिए । उडान […]
दोलखा भीमसेन ,एक शिला तीन अवतार भित्र लुकेको आख्यान यस्तो छ ?
८ फाल्गुन २०७७, शनिबार ११:२६ February 21, 2021 Buddha Sharan
दोलखाको सास्कृतिक सम्पदा पुस्तकका अनुशार दोलखामा अधिकांस घर ढुंगाले बनेको हुँदा तिब्बती भाषामा ‘दो’ – ढुंगा , ‘ल’ – मन्दिर र ‘खा’ – घर नै कालान्तरमा दोलखा भन्न थालिएको हो भन्ने भनाइ पाइन्छ । अर्को आख्यान अनुशार देशको रक्षार्थ दोलखा सहरको चारै तिर ढुंगाको पर्खालले घेरी पश्चिम तिर ढुंगाकै ठुलो ढोका राखियो , यही […]